Uncategorized Archives - Page2of 330 - Sainpwar
အချိန်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ အချစ်ဦးကိုလုံးဝမေ့မရတာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ
November 15, 2021 Bo Wai 0
အချစ်ဦး မြေးဦး ရတဲ့အထိ မမေ့ဘူးဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ အချစ်ဦးကိုမမေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ချစ်နေလို့တော့မဟုတ်တတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမယ့်လည်း အချစ်ဦးကိုဆိုရင် မေ့မရနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အချစ်ဦးကိုမေ့မရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်နော် (၁) အချစ်ဦးဖြစ်လို့ အချစ်ဦးဆိုတာက ကိုယ့်ကို ပထမဆုံး အချစ်နဲ့ တွေ့စေခဲ့တဲ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကြောင့်သာအချစ်ကို ပထမဆုံးစတင်ခံစားပြီး သိရှိခဲ့တာပါ။ ဘဝရဲ့ပထမဆုံး ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမှတ်မိတတ်ကြတာ လူအများသဘာဝမို့ အချစ်ဦးကိုမေ့မသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် (၂) ချစ်ဖူးခဲ့လို့ ပထမဆုံး အချစ်ကိုခံစားပြီး ပထမဆုံး အချစ်တွေ အပြန်အလှန်ပေးခဲ့ဖူးသူဆိုတာ ဘယ်တော့မှမေ့မရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ […]
လူကြည့်များ​နေတဲ့​အမေနံကရိုင်.းမယ်တေ.ာ်ကြီး တကယ်ဝင်ပူ.းနေ​တယ်​ဆို​သော (ရုပ်​သံဖိုင်​)
ျမင္ရခဲတဲ့ ႐ုပ္သံဖို င္ေလးပါေနာ္။ မွ်ေဝ လိုက္ၾက ပါဦးေနာ္။ အားလုံ းက.ပ္ႀကီ. းသုံးပါ းေက်ာ္လႊ.ားနိုင္ၿပီး ေဘးအႏၲ.ာရာ.ယ္ က.င္းရွ.င္းၾကပါေစေနာ္။ တကယ္ကုိ​ ျမင္ရခဲတဲ့ ႐ုပ္သံဖိုင္ေ လးပါေနာ္။ မွ်ေဝ လိုက္ၾက ပါဦးေနာ္။ အားလုံး ကပ္ႀကီ.းသုံးပါ းေက်ာ္လႊ.ား နိုင္ၿပီး ေဘ.းအႏၲာရာ.ယ္က.င္းရွင္.း ၾကပါေစေနာ္။ ျမန္မာျပည္ႀကီးလဲ အျမန္ဆုံးၿ ငိမ္းခ်မ္းၿပီ းဖတ္​႐ွဳ႕​ေပးၾကတဲ့ ျမန္မ ာျပည္သူ/သားမ်ားအားလုံးစစ္အာဏာ ရွင္ လက္ေအာက္ က​ေန အျမန္ဆုံး […]
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရုပ်ဆိုးတယ် ထင်နေတဲ့ သူများသာ ဖတ်ပါ….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရုပ်ဆိုးတယ် ထင်နေတဲ့ သူများသာ ဖတ်ပါ။ ချောတယ် ထင်တဲ့ သူတွေ ဒီ Post ကို ကျော်ခွသွားကြဖို့မေတ္တာ ရပ်ခံပါရစေ…… ရုပ်ဆိုးတယ် ထင်တဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော် ကလူတိုင်း လှပါတယ်ရုပ်ဆိူးတဲ့ သူဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ မရှိဘူး။ ဘယ်သူမဆို သူ့ အလှနဲ့ သူ တောက်ပ နေကြတာ ချည်းပဲဆိုပြီး Motivation တွေ ပေးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို Moti […]
အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စတင်ပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတဲ့ နေဝင်း မိသားစု
အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေဝင်းရဲ့ မြေးတစ်ဦးဖြစ်သူ အေးနေဝင်းဟာ ဒီကနေ့မနက် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်မှာ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကနေ ဒူဘိုင်းမြို့ကို ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲလောက်က ရန်ကုန် ၉ မိုင် အေဒီလမ်းမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်နေဝင်းအိမ်ကနေ ဒတ်ဘယ်ကပ်လေးစီး စစ်သားအပြည့်နဲ့ ထွက်လာတယ်။ ဟွန်းတွေတီးပြီး မီးလည်းထိုးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဒီနေ့ ရန်ကုန် – မလေး – ဒူဘိုင်း […]
အပြစ်မရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကို မဖမ်းချင်လို့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုပ်ခဲ့တဲ့ ရဲမေ ဝေဝေလွင်
အျပစ္မရွိတဲ့ ျပည္သူေတြကို မဖမ္းခ်င္လို႔ စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန႔္က်င္ၿပီး CDM လုပ္ခဲ့တဲ့ ရဲေမ ေဝေဝလြင္ ျပည္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇၊ ၂၀၂၁။ ျပည္ၿမိဳ႕က ရဲဝန္ထမ္းေတြထဲမွာ အေစာဆုံး CDM လုပ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ရဲေမေမေဝေဝလြင္ဟာ အာဏာရွင္ကို ဆန႔္က်င္ၿပီး CDM လုပ္လာခဲ့တာ ၈လေက်ာ္ၾကာလာခဲ့ီျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာသိမ္းကာလအစပိုင္းမွာ CDM ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခိုင္းခဲ့တာက CDM လုပ္ဖို႔တြန္းအားပိုျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးတာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ခ်င္လို႔ ၃လပိုင္းေလာက္မွာကတည္းက […]
ကယားပြည်နယ် ၆ မိုင်တိုက်ပွဲမှာကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်စိုင်းဘုန်းမင်းသန့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းပြန်တွေ့
ကယားပြည်နယ် ၆ မိုင်တိုက်ပွဲမှာကျဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်စိုင်းဘုန်းမင်းသန့်ရဲ့ရုပ်အလောင်းပြန်တွေ့ People’s Spring ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလအတွင်း ကယားပြည်နယ် ၊ဒီမော့ဆို တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ စိုင်းဘုန်းမင်းသန့်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်တွေ့ပြီလို့ မိခင်ဖြစ်သူက ဖေ့ဘွတ်ခ်ကနေ အသိပေးထားပါတယ်။ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်ရတဲ့နေ့ဟာ ကျဆုံးတဲ့ရက်ကနေ ရက် ပေါင်း ၄၀ တိတိကြာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သားဖြစ်သူကိုရှာဖွေပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး သွားရောက်ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ တာဝန်ယူမှု ၊တာဝန်ခံမှု အပြည့်ရှိတဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ထားပါတယ်။ KPDF ကလည်း ရဲဘော်စိုင်းဘုန်းရဲ့ […]
မီတာခပေးကြရန် မိုက်ဖြင့်အော်နေစဥ် ကျောက်ဆည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးထဲ ဝင်ပစ်ခံရ…
မီတာခပေးကြရန် မိုက်ဖြင့်အော်နေစဥ် ရုံးထဲ ဝင်ပစ်ခံရ၍ ကျောက်ဆည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး သေဆုံး ဧရာဝတီ၊နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၁ မန္တလေးတိုင်း၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးအား Dragon Kyaukse Defense Force (DKDF)အဖွဲ့က ရုံးအတွင်း ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ သေဆုံးသူမှာ အသက် ၅၀ ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိ သင်ပျိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းဌေး ဆိုသူဖြစ်ပြီး နို၀င်ဘာလ ၁ ရက် ညနေ ၆ […]
ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက် အလေးမထားပဲ ပစ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ မငိုနဲ့ ညီမလေး
ကိုယ့်ကို အလေးထားတဲ့လူတွေအတွက် အချိန်ပေးရတယ်ဆိုတာ တန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့လူတွေအတွက် မျက်ရည်တွေ ကျနေရတာတော့ မတန်ဘူး ။ မငိုနဲ့ ညီမလေး မျက်ရည်တွေက စျေးကြီးတယ် ။ ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ကြည့်နေလို့သာ အရာရာကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်ပြီး အရာရာမှာ ကြေကွဲနေခဲ့မိတာ တကယ် ဦးဏှောက်နဲ့သာ တွေးတတ်ခဲ့ရင် … သူဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှ မဟုတ်ဘူး နှလုံးသားကသာ သူဟာ အရာရာပါဆိုပြီး ဖြစ်နေတာပါ ။ […]
“သိပ်တော်တဲ့မိန်းမ တစ်ဦးကအရှုံး ကို အပြုံး နဲ့ သိမ်း ပါတယ်” “သိပ်တော်တဲ့မိန်းမ တစ်ဦးကသူမရဲ့ လှပမူကိုကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့ ထိန်းသိမ်း ပါတယ်” “သိပ်တော်တဲ့မိန်းမ တစ်ဦးကနာကျင်မူကို တိတ်ဆိတ်နေခြင်း နဲ့ထိန်းပါတယ်” “သိပ်တော်တဲ့မိန်းမကမနာလို စိတ်နဲ့ အချိန်မဖြုန်းဘူး။ကိုယ့်အစွမ်းစဘဲကိုယ် ချိန်ဆနေတတ်တယ်။ “သိပ်တော်တဲ့မိန်းမ တစ်ဦးကကိစ္စရပ်တိုင်း မြန်ဖို့ထက် မှန်ဖို့ကို ပဲအာရုံကို တတ်ပါတယ် ။ “သိပ်တော်တဲ့ မိန်းမ တွေကကိုယ့်အနား မရှိနိုင် တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ဦးအတွက်တမ်းတ ပူဆွေးမနေဘူး” […]
မြန်မာ့အရေးကိုကမ္ဘာကပိုမိုအာရုံစိုက်လာအောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ဂျပန်သတင်းထောက်ကြီး….
ဂျပန်လူမျိုး သတင်းထောက်နဲ့ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင် ယုကီကီတာဇုမိ ရဲ့ “ကျည်ဆန်ပေါက်တွေနဲ့တိုင်းပြည်” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပြပွဲတခုကို အောက်တိုဘာလ ၂၈ ကနေ ၃၁ အထိ ယိုကိုဟားမားမြို့က ဓာတ်ပုံပြပွဲနေရာတခုမှာ လုပ်နေပတယ်။ မြန်မာနွေဦးလှုပ်ရှားမှု အတွင်းမှာ ပါဝင် သတင်းယူခဲ့ပြီး နှစ်ကြိမ်တိုင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ဒုတိယအကြိမ်မှာ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရတဲ့ယုကီ ဟာ မြန်မာ့အရေးကို ဂျပန်ပြည်သူတွေ ဆက်လက် စိတ်ပါဝင်စားနေစေဖို့ အခုလို လှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်နေတာပါ။ ဓာတ်ပုံပြပွဲကို လူတွေ […]